Uppercut Deluxe - Styling Powder | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › New Arrivals › Uppercut Deluxe - Styling Powder
အမျိုးအစား: ဆံပင်ပုံသွင်း Powder / Dry Shampoo
--High Volume & Texture | Dry Matte Finish | Hair Powder--
Uppercut Deluxe - Styling Powder သည် သင့်ဆံပင်ကို ထူထူထဲထဲရှိစေပြီး၊ သဘာဝကျကျ Natural Matte Finish ဖြင့် လျင်လျင်မြန်မြန်ပုံကျစေမည့် ဆံပင်ပုံသွင်း Powder ဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင်ပုံသွင်းရန်အတွက်သာမက ဦးရေပြား အဆီထွက်များသူတို့အတွက် အဆီပြန်ခြင်းလျော့နည်းစေသည့် Dry Shampoo အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာကျော် အရည်အသွေးမြင့် Premium ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Uppercut Deluxe - Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆံပင်ကိုအလွယ်တကူ ပုံသွင်းစေနိုင်ကာ၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံကျစေပါသည်။
ဆံပင်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပေးပြီး၊ လက်နှင့်အသာအယာဖွလိုက်ရုံဖြင့် ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲဖြစ်စေကာ၊ Volume ကောင်းကောင်းနှင့် Texture အရေးအကြောင်းကြောင်းများကောင်းကောင်းရစေပါသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး လွယ်လွယ်ကူကူဆံပင်ကိုပုံကျစေရုံသာမက ဦးရေပြား အဆီထွက်များသူတို့အတွက် အဆီပြန်ခြင်းလျော့နည်းစေမည့် Dry Shampoo အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုပုံ: Uppercut Deluxe - Styling Powder ကို ဆံပင်ခြောက်သွေ့နေချိန်တွင် ဆံပင်အမြစ်ထဲတို့တိုက်ရိုက်ဖြန်းပေး၍ (သို့မဟုတ်) လက်ပေါ်သို့တင်ပေးပြီး လိမ်းပေးကာ လက်နှင့်အလွယ်တကူပုံသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်အသုံးပြုရုံသာမက သင်နှစ်သက်ရာခေါင်းလိမ်းဆီတစ်မျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်ပြီးလည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။
ဆံပင်အရောင်မတောက်စေသည့် သဘာဝဆန်ဆန် Natural Matte Finish
ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲရှိစေပြီး Texture ကောင်းကောင်းရစေခြင်း
20g ဘူး size
Uppercut Deluxe presents the newest addition to their hair styling line up - Styling Powder. Uppercut Deluxe - Styling Powder adds volume and texture to all hair types and lengths withanatural, matte finish.
Natural Matte Finish with no shine